Wararkii ugu dambeeyay Qaraxii xalay ee ka dhacay Muqdisho & Khasaarihii uu geystay | HalQaran.com
Home Warar Cusub Wararkii ugu dambeeyay Qaraxii xalay ee ka dhacay Muqdisho & Khasaarihii uu...
Wararkii ugu dambeeyay Qaraxii xalay ee ka dhacay Muqdisho & Khasaarihii uu geystay
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin cusub ka soo baxaya Qaraxii Ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay Maqaayad lagu caweeyo oo ku taalla meel u dhow Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho, waxaana qaraxaas lagu dilay dad u badan dhallinyaro.
Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa fuliyay Qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, kaasi oo isku qarxiyay Maqaayad lagu Magacaabo Gelato Divino oo ahayd mid aad u mashquul badan goorta u qaraxu dhacayay.
Shaqaalagha gurmadka deg-deg ah ee Amiin Ambalaas ayaa sheegay in Qaraxa ay ugu yaraan ku nafwaayeen 8 qof, halka dhaawacana uu gaaray ilaa 10 ruux.
Dhallinyarada qaraxa lagu dilay ayaa ahaa kuwo si weyn looga yaqaanay magaalada Muqdisho, waxaana ay isugu jireen shaqaalle dowladeed, ganacsato iyo dhallinyaro dhawaan waxbarashada dhammeystay.
DF Soomaaliya iyo hoggaamiyeyaasha xisbiyada ayaa si kulul u cambaareeyay falka lagu qarxiyay dhallinyarada, waxaana ay ku baaqeen midnimo iyo in la xoojiyo dagaalka ka dhan ah Ururka Al-Shabaab.
dhalliyaro la xasuuqay
Qaraxii maqaalayadda Gelato Divino